PPS AP® Exam Info (Somali) – APTS: Exam Fee Experts
Portland Public Schools – Isdiiwaangalinta & Xeerarka Imtixaanaadka AP
Fadlan dib u eeg macluumaadka soo socda si aad isugu diiwaangeliso imtixaannada Maayo 2020 ee AP (Advanced Placement). Si taxaddar leh u akhri maadaama ay xeerarka iyo habraacyadu is-baddaleen sannad dugsiyeedka 2019-20. (Haddii aadan ahayn arday PPS ah laakiin aad jeceshahay inaad imtixaanka AP qaadato, fadlan kala xiriir Anna Lortz xafiiska AP ee degmada PPS: 503-916-3517 ama alortz@pps.net.)
Wakhtiyada Kama Dambeysta iyo Habraacyada Cusub!
Tallaabada 1: Gudbi Lacagta Deebaajiga Imtixaanka – Si aad u muujiso rabitaanka iyo ka go’naanta qaadashada imtixaanka AP® ee la qaadayo Maayo 2020, deebaaji $40 oo imtixaankiiba ah ayaa la siinayaa APTS kahor Noofambar 1, 2019.
Tallaabada 2: Isdiiwaangali Imtixaankaaga AP – Si ay u dhamaystiraan isdiiwaangalinta imtixaanka AP, ardaydu waa inay ku BIIRAAN kaliya kooxdooda imtixaanka AP® ee myap.collegeboard iyagoo isticmaalaya koodkooga iimaylka loogu diray kadib markii khidmada deebaajiga imtixaanka la bixiyay. Noofambar 1, 2019 waa waqtiga kama dambeysta ah ee aad iska diiwaangelin karto imtixaankaaga AP. (Ardayda AP, nidaamkani waa nidaam gaar ka ah ka mid noqoshada qeybta fasalka onlaynka ah ee AP ee lagu dhameeyay fasalka.)
Tallaabada 3: Gudbi haraaga kugu dhiman – Laga bilaabo Noofambar 30, ardayda/qoysaska codsaday imtixaan(ka/aadka) ayagoo bixinaya deebaajiga waxay heli doonaan qaansheegta shaqsiyeed ee lacagta haraaga ah ee ku dhiman oo iimaylka loogu soo diri doono . Hadhaaga ayaa loo bixin doonaa si buuxda kahor Maarso 1, 2020.
LA SOCO: Bixinta lacagta iyo codsashada imtixaanka LABADABA waa in la dhameystiraa Noofambar 1, 2019 si ay Isu-duwaha AP ugu suurtogaliso inuu u gudbiyo dalabka imtixaanka Guddiga Kulliyadda. Ardayda aan labada tallaaboodba u dhamaystirnayn 1-da Noofambar waxay bixin doonaan lacag ganaax ah oo ah $40/imtixaankiiba. Ma jiri doonaan dalabyo imtixaan oo cusub wixii ka dambeeya Maarso 1, 2020.
TAARIIKHAHA & WAQTIYADA IMTIXAANKA: Maayo 4-8, 2020 iyo Maayo 11-15, 2020
Imtixaannada subaxdii. Albaabadu waxay furmi 7:15; Soo galidda waxay bilaabmaysaa 7:30; Imtixaannadu waxay dhamaanayaan qiyaastii 12 pm.
Imtixaannada galabnimo. Albaabadu waxay furmi 11:15; Soo galidda waxay bilaabmaysaa 11:30; Imtixaanadu waxay dhamaanayaan qiyaastii 4:00.
Ardayda looma oggola inay waqti hore ka baxaan imtixaanka kasto oo AP ah. Ardayda leh isboortiga dugsiga kadib ama shaqooyinka ayaa mas’uul ka ah inay waajibaadkooda imtixaanka AP u sheegaan tobabarayaasha ama loo shaqeeyayaasha.
Soo Daahidda – Ardayda timaado kadib bilowga maamulka imtixaanka lama aqbali doono.
Maqnaanshaha – Dhamaan maqnaanshaha imtixaannada AP waxaa loo sheegi doonaa dugsigaaga sare. Haddii aad ku seegto imtixaanka sababo ay ansixiyeen Gudiga Kulliyadu, waxaad laga yaabaa inaad imtixaan dambe gasho.
Luuqada Isbaanishka AP iyo Aragtida Muusikada AP ayaa laga yaabaa inay socdaan kadib duhurkii sababtoo ah baahida duubista codka. Fadlan soo qaado cunno dheeri ah.
Imtixaannada AP badankoodu waxay ka dhici doonaan Portland Expo Center, 2060 N. Marine Drive, Portland, OR 97217- oo si habboon ugu yaal TriMet MAX Yellow Line.
Imtixaannada Shiinaha AP iyo Jabbaan AP ayaa ka dhici doona dhismaha weyn ee maamulka PPS: 501 N. Dixon St. Hubso inaad u siiso waqti ku filan oo aad ku tagto goobta imtixaanka kahor inta uusan imtixaanku bilaaban.
Ardayda imtixaanka ku qaadaanaya qaabiladaaha naafada ee Gudiga Kulliyadu ansixiyeen waxay imtixaankooda ku qaadan doonaan dugsiyadooda sare
WAXAAN SI AAD AH UGU TALINAYNAA in ardayda la keeno, ama gaari wada qaataan ama ay isticmaalaan TriMet.
~ U oggolow waqti ku filan taraafikada si aad u gaarto goobta imtixaanka kahor intaysan bilaaban soo-gelidu. ~
Ardayda ku baarkin gareysata Expo Centre waxay heli doonaan foorjarka baarkinka ee bilaashka ah dhamaadka imtixaanka.
ISDIIWAANGELINTA: Waa inaad dhamaystirtaa diiwaangelinta onlaynka ah inta u dhexeysa 1-da Oktoobar iyo 1-da Noofambar si aad uga qeybgasho imtixaanka AP.
Oggolaanshaha: Adiga iyo waalidkaaga/mas’uulkaaga waxaad u baahan doontaan inaad bixisaan saxeex elektiroonig ah oo oggolaanaya in:
Aad oggolaansho u heysatidinaad u safarto/tagtid goobta imtixaanka ee dhismaha ka baxsan.
Aad u hogaansami doontaan inaad qawaaniinta amniga imtixaanka sida ay PPS ku qeexday tilmaamaha ku yaala barta internetka diiwaangelinta iyo sidoo kale Buug-yaraha Guddiga Kulliyada ee Loogu Talogalay ardayda AP iyo Waalidiinta.
Isdiiwaangelintu waa waajib: Ardayda looma oggolaan doono inay “iska soo galaan” maalinta imtixaan aysan horay uga diiwaangashanayn. Waa inaad isdiiwaangeliso ugu dambayn 1-da Nofeembar, 2019.
Si aad isu diiwaangeliso laba imtixaan oo isla hal maalin la qaadanayo, u buuxi foomka isdiiwaangelinta si buuxda lacagtana bixi. Ardayga waxa la soo xiriiri doono Adeegga Imtixaanaadka AP si loogu wargaliyo midka labada imtixaan ee AP loo qoondeeyay taariikh kale iyo tafaasiisha taariikhda/saacada.
Ardayda ma qaadan karaan AP Calculus AB iyo BC isla hal sanno gudaheed. Si taxaddar leh u dooro.
Ka taxaddar marka aad iska-diiwaangelinaysid LUUQADDA Ingiriisida ama FARSHAXANKA Ingiriisida. Dooro midka saxda ah. Ka hubso macallinkaaga AP haddii aadan hubin.
LACAG BIXINTA: $40 deebaaji ah imtixaankiiba waa in horay loo bixiyaa. Diiwaangelintu ma dhameystirna ilaa bixinta deebaajiga la helayo. Hadhaaga kugu dhiman waxa bil walba laguugu soo daalaci doonaa iimayl ka yimaada APTS illaa la gaadhayo waqtiga kama-dambeysta ah ee bixinta ee Maarso 2020.
Qiimaha: Imtixaan kastaa waa $67. (Imtixaanada AP Capstone waa $117.)
Kaarka Deynta(Credit)/Kaydka(Debit): Ku bixi onlayn adigoo sistamkan isticmaalaya.
Jeeg ama Money Order: Raac tilmaamaha adoo adeegsanaya sistamkan iyo lacag-bixinta boostada ee cinwaanka onlaynka lagugu siiyay. (Waa in boostada lagu calaamadeeyaa ugu dambayn 15-ka Oktoober, 2019.)
Kaash: U gudbi lacag kaash ah buug-hayaha dugsigaaga ka hor 15-ka Oktoobar, 2019.
Lacag soo celinta ayaa suurtagal ah ilaa 1-da Noofambar, 2019. Taariikhdaas kadib, lacag celin ka yar deebaajiga $40/imtixaankiiba ayaad la heli karaa.
KA DHAAFIDA KHIDMADDA:
Wixii ku saabsan helidda dhimista khidmada. Fadlan booqo Isu-duwaha Meeleynta Sare ee dugsigaaga. Waa inaad haysataa aqoonsi sawir leh si aad u hesho foomka ka dhaafista lacagta. Waqtiga kama dambeysta ah ee la soo celinayo foomka ka dhaafida lacagta ee saxiixan waa 15-ka Oktoobar, 2019 kahor 4:00 PM.
Markaad hesho koodka ka dhaafida lacagta, waxaad awoodi doontaa inaad iska diiwaangeliso barta internetka ee APTS si aad u hesho qaddarka la dhimay. Waa inaad is-diiwaangelisaa ugu dambayn 15-ka Octoobar, 2019.
Adeegsiga kood aan la oggolaan wuxuu sababi in la joojiyo dalabka imtixaanka illaa si buuxda loo bixiya lacagta.
***Iyadoo ku xidhan nooca ka dhaafida khidmadda ee la helay, ardayda waxa lagu daalici karaa khidmada imtixaanka ee aan la isticmaalin haddii aysan soo xaadirin oo aysan dhamaynin imtixaanka AP.***
Qaabilaada Ardayda Naafada ah: Qaabilaadaha imtixaanka ee loo helo IEP ama 504 si otomaatig ah looguma adeegsan karo imtixaannada AP®. Guddiga Kulliyadu waxay u baahan yihiin ardayda rabo qaabilaadaha imtaxaannada AP® inay si gaar ah u codsadaan oggolaanshaha kahor inta aan wax qaabilaad ah la siin bisha Maayo. Wakhtiga kama dambaysta ah ee sannadkan ee codsashada qaabilaadaha la ansixiyay waa 17-ka Janaayo, 2020. Fadlan la xiriir Isu-duwaha AP® ee dugsigaaga haddii aadan hubin cida aad kala hadli lahayd hanaanka [la marayo].
XILLIGA IMTIXAANKA: Fadlan soo qaado waxyaabaha soo socda:
Sawirkaaga aqoonsiga (ama aqoonsi dawladeed ama aqoonsi dugsiyeed)
Ugu yaraan laba qalin beensal oo qoran oo #2 ah oo leh tirtireyaal (qalin beensalada kale lama oggola)
Ugu yaraan labo qalin biiroo oo madow ama buluug-madow-xiga ah oo loogu talogalay jawaab furan (muujiyeyaal iyo masaxayaal lama oggola)
Xisaabiyaha garaafka ee Bayoolajiga, Calculus AB/BC, Kemistiri, Fiisikis, iyo Tirakoobka (ka eeg tilmaamaha xisaabiyaha halkan collegeboard.com/ap/calculators). Ardayda way la iman karaan 2 xisaabiye balse lama oggola inay wadaagaan xisaabiyaha xilliga imtixaanka. Hubso in xisaabiyahaagu leeyahay baytariyo cusub.
Mastarad ama shay toosan (loogu talagalay imtixaanka Fiisikiska oo kaliya)
Cunto iyo biyo ku dhex jira bac wax laga dhex arki karo oo siibad leh lagana fogeeyay boorsada ama ta dhabarka.
Dhar diiran oo la iska dul gashtay
La soco: MA HELI doontid boorsadaada ama ta dhabarka marnaba inta uu socdo imtixaanku, xitaa xilliga nasiinada.
Qalabka elektirooniga ah (taleefannada, saacadaha casriga ah, ama teknolojiyadda la xirto, laabtob, kombiyuutarada tableetka, aaladaha Bluetooth-ka, aaladaha dhageysiga la qaadan karo ama duubista — MP3 player, iPod®, iwm. – kaamerooyinka ama qalabka sawirrada, aaladaha lagu isticmaali karo internetka, Waqti tiriyaha nooc kasta ha ahaadee, saacadaha dhawaaqo nooc kasta ha ahaatee, iyo aaladaha kale ee elektirooniga ama isgaarsiinta ag) waa ka mamnuuc qolka imtixaanka iyo aagga nasiinada.
Haddii ardaygu isticmaalo ama lagu arko mid kamid ah walxahaas elektroniga ah qolka imtixaanka gudihiisa ama inta lagu jiro nasiinada, waa lagala wareegayaa ardaygana waa laga saari doonaa imtixaanka. Haddii taleefan, saacad ama aalado kale oo elektiroonig ah ay ka dhawaaqaan, ka gariiraan, ka qayliyaan, iwm. Qolka imtixaanka inta uu imtixaanka socdo, waxay burburin kartaa imtixaanka QOF KASTA oo qolka ku jira.
Waxaan qirayaa inaan si buuxda u aqriyay oo u fahmay xeerarka diiwaangalinta imtixaanka AP.
Haddii aad diyaar u tahay inaad iska diiwaangeliso imtixaannada AP, halkaan guji